08 | November | 2013 | Burma Muslim
Daily Archives: November 8th, 2013
၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ နုရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံးကနေ ကြိုးပေးခံလိုက်ရတဲ့ ဝါဒဖြန့် မီဒီယာသမား Julius Streicher (ဂျူးလီယက် စတိုက်ချာ)
By burmamuslim on November 8, 2013 | Leaveacomment
မိုးပေါက် စင် shared ဝါးလုံးရှည် အတီး‘s photo.
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ရက် ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ နုရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံးကနေ ကြိုးပေးခံ လိုက်ရတဲ့ ဝါဒဖြန့် မီဒီယာသမား Julius Streicher (ဂျူးလီယက် စတိုက်ချာ) ကို သေဒါဏ်ပေးပြီးနောက်ရိုက်ကူးထားပုံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမား၊စာရေးဆရာနဲ့ သတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင် စတိုက်ချာဟာ သူကိုယ်ပိုင် သတင်းစာတိုက်မှနေ၍ နာဇီပါတီရဲ့ အာဘော်တွေနဲ့ အတူ ဂျူးလူမျိုး တွေကို ခွဲခြား ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ဆောင်းပါးများရေး သားခြင်း၊စာအုပ်များထုတ်ဝေခြင်းတို့ဖြင့် အင်မတန်မှ ကလောင်စွမ်း ထက်မြက်ခဲ့ပါတယ်။ အထင်ရှားစုန်းနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးစာအုပ်ကတော့ အဆိပ်ရှိသောမှိုများ လို့နာမည်ရတဲ့ ဂျူးတွေကိုသတ်ဖြတ်ချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ် လာအောင် လှုံ့ဆော်ထားတဲ့ ကလေးဖတ်ပုံပြင်စာအုပ်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းရတဲ့ အထိ အောင်မြင်မှူရခဲ့ပါတယ်။ စတိုက်ချာရဲ့ ကလောင်စွမ်း ထက်မြက်မှူကြောင့် နာဇီ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ မြောတ်စားမှူကို ခံရပြီး ဂျာမဏနိုင်ငံတလွှားမှာ စတိုက်ချာရဲ့ ဩဇာအာဏာဟာ အလွန်ပဲတန်ခိုးထွားခဲ့ပါ တယ်။စစ်ကြီးပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ စတိုက်ချာဟာ သူရဲ့ ချစ်လှစွာသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် အတူ နုရင်ဘတ်ခုံရုံးကို တတ်ခဲ့ရပါတယ်။တချိန်တုန်း က အောင်မြင်ကျော်ကြား ခဲ့သမျှ၊ ကလောင်စွမ်း ထက်ခဲ့သမျှတွေဟာ ခုံရုံးအရောက်မှာတော့ သူနဲ့သူ့ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို စွဲချက်တင်ဖို့ သက်သေ အထောက် အထားကောင်းကောင်းကြီးအဖြစ်တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မီဒီယာသမားတဦးဖြစ်တဲ့ စတိုက်ချာဟာလည်း သူရဲ့ ချစ်လှစွာသော နာဇီဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုးယောက်နဲ့ အတူ နုရင်ဘတ်တရားရုံးမှ ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတော့တယ်။ မကောင်းမှူဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ရက် ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ နုရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံးကနေ ကြိုးပေးခံလိုက်ရတဲ့ ဝါဒဖြန့် မီဒီယာသမား Julius Streicher (ဂျူးလီယက် စတိုက်ချာ) ကို သေဒါဏ်ပေးပြီးနောက်ရိုက်ကူးထားပုံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမား၊စာရေးဆရာနဲ့ သတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင် စတိုက်ချာဟာ သူကိုယ်ပိုင် သတင်းစာတိုက်မှနေ၍ နာဇီပါတီရဲ့ အာဘော်တွေ နဲ့ အတူ ဂျူးလူမျိုး တွေကို ခွဲခြား ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ဆောင်းပါးများရေး သားခြင်း၊စာအုပ်များထုတ်ဝေခြင်းတို့ဖြင့် အင်မတန်မှ ကလောင်စွမ်းထက်မြက်ခဲ့ ပါတယ်။ အထင်ရှားစုန်းနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးစာအုပ်ကတော့ အဆိပ်ရှိသောမှိုများ လို့နာမည်ရတဲ့ ဂျူးတွေကိုသတ်ဖြတ်ချင်စိတ် များဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ထားတဲ့ ကလေးဖတ်ပုံပြင်စာအုပ်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းရတဲ့ အထိ အောင်မြင်မှူရခဲ့ပါတယ်။ စတိုက်ချာရဲ့ ကလောင်စွမ်း ထက်မြက် မှူကြောင့် နာဇီ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ မြောတ်စားမှူကို ခံရပြီး ဂျာမဏနိုင်ငံတလွှားမှာ စတိုက်ချာရဲ့ ဩဇာအာဏာဟာ အလွန်ပဲတန်ခိုးထွား ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကြီးပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ စတိုက်ချာဟာ သူရဲ့ ချစ်လှစွာသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်အတူ နုရင်ဘတ်ခုံရုံး ကိုတတ်ခဲ့ရပါတယ်။ တချိန်တုန်းက အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့သမျှ၊ ကလောင်စွမ်း ထက်ခဲ့သမျှတွေဟာ ခုံရုံးအရောက်မှာတော့ သူနဲ့သူ့ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို စွဲချက်တင်ဖို့ သက်သေ အထောက် အထားကောင်းကောင်းကြီးအဖြစ်တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မီဒီယာသမားတဦးဖြစ်တဲ့ စတိုက်ချာဟာလည်း သူရဲ့ ချစ်လှစွာသော နာဇီဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုးယောက်နဲ့ အတူ နုရင်ဘတ်တရားရုံးမှ ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတော့တယ်။ မကောင်းမှူဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိပါ။
Posted in: သတင်း, အထူး, ဆောင်းပါး
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုမှတ်တမ်းတွေပြသထားတဲ့ ဟို လိုကော့စ် ပြ တိုက် တွင် ရိုဟင်ဂျာ ရုပ် ပုံ များ ခင်း ကျင်း ပြ သ
နိုဝင်ဘာ- ၈ ၂၀၁၃
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော် ဝါရှင်တန် ဒီစီ မှာရှိတဲ့ ဟိုလိုကော့စ်ပြတိုက်ရဲ့ အပြင်ပိုင်းနံရံတွေမှာ အကြမ်းဖက်ခြင်းခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ခင်းကျင်းပြသနေပါတယ်။ ဟိုလိုကော့စ်ပြတိုက်ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း နာဇီ ဂျာမဏီမှ ဂျူး ခြောက်သန်းခန့် စုပြုံသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ မှတ် တမ်းတွေ ကို ခင်ကျင်းပြသတဲ့ သမိုင်းဝင်ပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြတိုက်ဟာ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးနေ တဲ့ ပြတိုက်ကြီး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုလိုကော့စ်လို့ခေါ်တဲ့ ဂျူးတွေကို စုပြုံသတ်ဖြတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အကျဉ်းတန်တဲ့ဖြစ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ထပ်မံ မဖြစ်ရအောင် ဟိုလိုကော့စ်ပြတိုက်ကြီးက မီးမှောင်းထိုးပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဘောစနီးယား၊ ရဝါန်းဒါးနဲ့ ဆူဒါန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးတုန်း သုတ်သင် ရှင်းလင်းမှု ရုပ်ပုံတွေကိုလည်း ကမ္ဘာက သိအောင် ခင်းကျင်းပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက် အခြမ်းမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကို အကြမ်း ဖက်တိုက်ခိုက်နေတာဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု အသွင်ကူးပြောင်းသွားမှာကို စိုးရိမ်ပြီး ဟန့်တား သတိပေးတဲ့ သဘောနဲ့ အခုလို ပြသနေ တာ ဖြစ်တယ်လို့ အေပီ သတင်းတစ်ရပ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြတိုက်မှာ ခင်းကျင်းပြသနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကတော့ အင်ဒီယားနားနယ်ဖွား ဓါတ်ပုံဆရာ ဂရေခ့် ကောစတန်တင်း ကိုယ်တိုင် အကြမ်းဖက်ဒေသတွေဆီ သွားရောက် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောစတန်တင်းဟာ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာ ခုနှစ် နှစ်ခန့် အချိန်ပေးပြီးဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ အံ့မခန်းနိုင်လောက်အောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ ပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေက နိုင်ငံ အနှံ့မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုဘဲ အာရုံစိုက်နေကြပြီး ဒီလို ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်တွေက အမှောင်ထုထဲမှာ ဖုံးအုပ်နေတာကတော့ တော်တော် စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်” လို့ ကောစတန်တင်းကပြောပါတယ်။
ကောစတန်တင်းဟာ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေရသူတွေကို ကမ္ဘာလည့်မှတ်တမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှား၊ နီပေါ၊ သီရီလင်္ကား၊ ကန်နီယား၊ အိုင်ဗရီကောစ်၊ ကူဝိတ်နဲ့ ဒိုမိနီကန် ရီပတ်ပလစ် နိုင်ငံတွေမှာလည်း အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အခြေအနေကတော့ အဆိုးရွားဆုံးပါဘဲလို့ သူကဆိုပါတယ်။
“အခုဆိုရင် စစ်တွေမြို့မှာ မွတ်စလင်တွေလုံးဝ မရှိတော့သလို ခံစားရတာကတော့ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာဘဲ။ မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုဖို့ နိုးဆော်သံ လည်းမကြားရတော့ဘူး။ ဗလီကျောင်းတွေကလည်းပျက်ဆီးကုန်ပြီ။ လုံးဝမပျက်ဆီးတဲ့ဗလီတွေဆိုရင်လည်း မြန်မာစစ်တပ်က ဗလီတွေထဲမှာ ဝင်နေ နေကြတယ်။” လို့ မတ်လ က စစ်တွေကိုသွားလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကို ကောစတန်တင်း ကပြောပြပါတယ်။ ပြောင်းရွေ့နေရာ ချထားပေးတဲ့ စခန်းတွေက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကလည်း အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေပါတယ်လို့ ကျနော်တို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ … ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေ နောင်အနာဂါတ်မှာ တစ်ခြားလူတွေမကြုံတွေ့ ရအောင် ကျနော်တို့ တက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ကြိုးစားကာကွယ်ချင်လို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဟိုလိုကော့စ်ပြတိုက်ရဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကာကွယ်ရေးဌာန ဒါရိုက်တာ မိုက်ကယ် အဘ္ဘရာမိုဝဇ် ကပြောပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု (Genocide) မဟုတ်ဘူးလို့ အများစုက သုံးသပ်နေကြပေမယ့်၊ ဒီကျူးလွန် မှုတွေဟာ လူသားများအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း (Crime Against Humanity) ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်အများက လက်ခံထားကြပါ တယ်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကို သူတို့ရဲ့မွေးရပ်ဇာတိမြေမှ ထွက်ပြေးပြောင်ရွေ့သွားရအောင် ဦးနေဝင်းခေတ်ကတည်းက နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှင်ထုတ်နေ တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ယေဘုယ အားဖြင့် လူမျိုးတုန်းသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု (Ethnic Cleansing) လို့လည်း အများစုကလက်ခံထားကြပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေ မနေနိုင်လောက်အောင် ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေဖို့ကတော့ပြေးစရာမြေမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြောင်းရွေ့ထွက်မပြေးနိုင်တော့တဲ့ အဆုံးမှာ ဂျောင်ပိတ်နေမိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာကတော့ ကမ္ဘာ ပညာရှင်တွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲ မကြာခဏဆိုသလို ရိုဟင်ဂျာတွေ ထွက်ပြေးကြရင်း လှေမှောက်သေဆုံးကြရတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် စိုးရိမ်စရာတွေ ပိုမိုကြီးထွားလာနေပါတယ်။
Posted in: မှတ်စု, သတင်း, အထူး
တော်လှန်ရေးရဲဘော်သခင်လှကြိုင်၊အသက် ၉၃ နှစ် အရွယ် မှာ ကူ ညီသူ မရှိ ၍ ပဲခူး တံတားပေါ်မှာ ပိုက် ဆံတောင်း စား
· တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းမှာ သူတို.ပါခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် ==============================
ပဲခူးတံတားပေါ်မှာ ပိုက်ဆံတောင်းစားနေရရှာတဲ့ တော်လှန်ရေးရဲဘော်ကြီး။ ပဲခူးတံတားပေါ်မှာ ပိုက်ဆံတောင်းစားနေတဲ့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက် ကိုအင်တာ သွားဗျူးတာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မေး။ ။အဘနံမည်ဘယ်လို ခေါ်ပါသလဲ?အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ
ဖြေ။ ။သခင်လှကြိုင်ပါ။အသက်က ၉၃ နှစ်ကွဲ့။
ဖြေ။ ။တော်လှန်ရေးရဲဘော်ပါ။ဗိုလ်ရန်နိူင်ရဲ့ တစ်ပည့်ပါ။
မေး။ ။ဘယ်မှာနေလဲ ?ဘယ်သူနဲ့နေလဲ?
ဖြေ။ ။အိုးလေးစု ထဲမှာနေတယ်။မုဆိုးမသမီးနဲ့ မြေးနဲ့နေပါတယ်။
ဖြေ။ ။အဆင်မပြေလို့ပါ။ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။
မေး။ ။နိူင်ငံတော်က မထောက်ပံဘူးလား?။မော်ကွန်းဝင်လက်မှတ်တွေ ဘာတွေ မရှိဘူးလား?
ဖြေ။ ။မထောက်ပံပါဘူး။ဦးနေ၀င်း ပေးခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ပြု လွှာတော့ရှိ ပါတယ်။
မေး။ ။မျက်စီတစ်လုံးက ဘာဖြစ်တာလဲ?။
ဖြေ။ ။သုံးထောင်လောက် ရပါတယ်ကွယ်။
Posted by Kyi Linn (Kyaw Swar Myint ၏ စာမျက်နှာ မှ ကူးယူဖြန့်ဝေသည်) အကြင်နာတရားရှိတဲ့ ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဥာဏ်ဝင်း ထံ ရောက်ပါစေhttp://www.facebook.com/lwinthandarsoe
Facebook ရဲ.တန်ခိုး အကျိုးပေးလေပြီ
မကြာသေးမီက ပဲခူးမြို.က လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ရေးတပ်သားကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သခင်လှကြိုင် (၉၃) နှစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို.၀ိုင်းဝန်းပြီး လူမှုကွန် ယက် ဖေ့ဘုတ် မှာ ရေးကြ၊ရှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ လူမှုအဖွဲ.အစည်းတွေ၊ စေတနာရှင်တွေနောက်ဆုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးကပါ ကူညီထောက်ပံကြတော့မယ်လို.သိရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ခေါင်း စဉ်လေးပေး လိုက်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို. ခင်ဗျားတို. အချိန်ကုန်ခံပြီး ကွန်ပြုတာရှေ.မှာနေခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ် ကျွန်တော်တို.အားလုံးရဲ.မှန်ကန်တဲ့ စိတ်စေတနာတွေကြောင်. Facebook ရဲ. တန်ခိုး အဘသခင်လှကြိုင်ကို အကျိုးပေးလေပြီ။
ကျော်စွာမြင့် ( ၁၉၈၈-၁၉၉၂ ဗ.က.သ
Posted in: အထူး
စစ်တွေ အကျဉ်းထောင်နံရံတစ်ခု ပြိုကျမှုဖြစ်
၈၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၃။ Coral Arakan News
စစ်တွေအကျဉ်းထောင်၏ အနောက်ဘက် နံရံတစ်ခုသည် ယမန်နေ့ ညပိုင်းက ပြိုကျမှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့သည် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကို ၁၈၂၇ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အဦများအနက်အစောဆုံး အဆောက်အဦဖြစ်သည်။
ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ကို ၁၈၂၄ ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီး ရခိုင်နှင့် တနင်္သာရီကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် စစ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်တို့တည်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်နှစ်တွင် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
တည်ဆောက်ပုံ စနစ်ကျပြီးလုံခြုံရေးကောင်းမွန်သဖြင့် စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလက ၈၈ ကျောင်းသားမင်းကိုနိုင်သည် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းကျခံနေခဲ့ရသည်။
ယခု စစ်တွေမြို့မှ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ဦးကျော်ဇောဦးနှင့် ဒေါ်ညိုအေးသည်လည်း စစ်တွေအကျဉ်းထောင်၌ အကျဉ်းကျခံနေဆဲဖြစ်သည်။
ယခုအကျဉ်းထောင်နံရံပြိုပျက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူ မရှိဟုသိရပြီး လုံခြုံရေးလည်း မကျိုးပေါက်ခဲ့ဟုသိရသည်။
photo; Ko naing soe
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနကရှုံးနေတယ်လို့ပြော နေ ပေ မယ့် အ မှန် တ ကယ် မှာ မ ရှုံး ဘူး လို့ အ ဆို ရှင် ဦး အေး မောက် က ပြော
မီတာခ တိုးမကောက်ဖိုနဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လွှတ်တော်ကို ပြန်တင်ပြဖို့ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထဲမှာ မလိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောက်က မီတာခတွေ တိုးမကောက်ဖို့ အရေးကြီးအဆိုတင်တာကို လွှတ်တော် က အတည်ပြု လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ရှုံးနေတယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် အမှန်တကယ်မှာ မရှုံးဘူးလို့ အဆိုရှင် ဦးအေးမောက်က ပြောပါတယ်။
အဆိုရှင် ဦးအေးမောက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒီနေ့ အန်ကယ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ မီတာခ မတက်ဖို့ အရေးကြီးအဆိုတင် သွင်းတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ပြောပြပါဦး ခင်ဗျ။
“အဓိကကတော့ ကျနော်တို့က အချက်တွေ အကြောင်းပြတာကတော့ နံပါတ်တစ်က ဒီနေ့ နိုင်ငံတော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရတာက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရသေးတယ်။ တနိုင်ငံလုံးနဲ့ ခြုံကြည့်ရင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကြားလောက်ပဲ ရသေးတယ်။ နံပါတ်နှစ်က ပျောက်ဆုံး ယူနစ်တွေ များနေတယ်။ လွှဲမှားစွာ စီမံခန့်ခွဲ မှုကြောင့်လည်း ပျောက်ဆုံးတယ်။ နောက်တခါ လူတွေရဲ့ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လည်း ပျောက်ဆုံးတာတွေရှိတယ်။ အဲဒါတွေဖြစ်နေတယ် ဒါတွေကို လည်း ပြန်လေ့ လာပေးပါ။ တကယ့်ပြည်သူအတွက်ကို တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းဒေသကြီးတွေက လျှပ်စစ်မီးကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရတယ်။ ပြည်နယ်တွေ မှာက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရတယ်။ အဲဒါကို အချိုးညီအောင်လည်း ပြန်လုပ်ပေးဖို့။ နောက်တခါ ပြည်မနဲ့ ပြည်နယ်တွေ လျှပ်စစ် ၁ ယူနစ်ကို ဈေးနှုန်းကွာတဲ့ ကိစ္စ။ လျှပ်စစ် တယူနစ် ကို ပြည်နယ်တွေမှာက သုံးရာ လေးရာ ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်တွင်းမှာက ၃၅ ကျပ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဖြစ်နေတာတွေ ဈေးနှုန်းကို နိုင်ငံတကာမှာလိုပဲ အိန္ဒိယတို့ ဘာတို့ လိုမှာပဲ။ တချို့ဟာတွေကို ဈေးယူသင့်တာကိုယူ ဥပမာ – ဇိမ်ခံလုပ်ငန်းတွေမှာ ဈေးယူ။ နောက် အိမ်တွင်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကျရင် သင့်တင့် တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို လျော့ယူပါဆိုပြီး အဲဒါမျိုးတွေလည်း ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
“အစိုးရက သူတို့တင်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို လျော့ချပေးဖို့ရန်အတွက် ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးတော့ အနီးကပ်ဆုံး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် မှာ ပြန် တင်ပေးဖို့။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ မတင်ခင် ဆက်ကြား သူတို့လေ့လာသုံးသပ်နေတဲ့အချိန် ဆက်ကြားမှာလည်းပဲ ဈေးနှုန်း တိုးမြှင့်ခြင်းတွေကို ရပ်ဆိုင်း ထား ဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနကကော ဘာများ ပြောသွားပါသလဲခင်ဗျ။
“လာဖြေတဲ့သူက ဒုဝန်ကြီးဖြစ်နေတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရဌာနကို ပြန်တင်ပြပြီးတော့ ဒါကို အချိန်မီ ကျနော်တို့ကို ပြန် လည်တင်ပြ မယ်လို့ ပြော ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဒီမီတာကတော့ လောလောဆယ် လွှတ်တော်က မတိုးနဲ့အုံး ရပ်ထားပေးပါလို့ ပြောလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့။
“ဟုတ်တယ်။ မတိုးပါနဲ့အုံး။ ခင်ဗျားတို့ ဒါတွေကို ပြန်စိစစ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့တတွေ သုံးတာ ဆွဲတာတွေကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုမှ မရှုံးနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်အဆို ကိုထောက်ခံတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တယောက်က ထောက်ပြတယ်။ ဒီဘတ်ဂျက်စာအုပ်တွေ ကြည့်ရင် မနှစ်ကအထိ ရှုံးတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အမြတ်တွေ ချည်းပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ထောက်ပြလိုက်တယ်။ သူတို့က ၁၈၈ ဘီလျံလောက် ရှုံးနေလို့ တိုးရတာပါလို့ ပြောတာကိုး။ တကယ်တော့ အခုအချိန်အထိ မရှုံးသေးဘူး။”
၀န်ကြီးဌာနတခုက မီတာခတွေ တိုးကောက်မယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ကိုတင်ပြီးမှ လုပ်ရတာ မဟုတ်လား၊ သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ တိုးကောက်လို့ရလား။ လုပ်ငန်းစဉ်က ဘယ်လိုရှိလဲ။
“လုပ်ငန်းစဉ်က အမှန်က အစိုးရအဖွဲ့က ဈေးနှုန်းတိုးမယ်ဆိုရင် အစိုးရအဖွဲ့က ဈေးနှုန်း လွှတ်တော်ကို တင်ပြပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရမယ်။ မီတာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း လွှတ်တော်စကာက တင်ပြတယ်၊ လွှတ်တော်က ပယ်ချလိုက်တယ်။”
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မှားနေတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား။
“အမှန်တိုင်းဆိုရင် ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မှားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။”
ဒီနေ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြောလိုတာရှိရင် ပြောပေးပါ။
“သူတို့က မီတာခ တိုးမြှင့်လိုက်တဲ့အတွက် အောက်ခြေ ပြည်သူမှာကတော့ ကောင်းကောင်း ခံစားသွားရတာပေါ့။ ပြည်သူတွေခံစားရတာကို လျစ်လျူရှုလုပ်တဲ့ သဘောမျိုးလည်း ပါတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့အဆိုမှာ သူတို့ပြောတာက အမျိုးမျိုး သူတို့ လေ့လာတယ်ပေါ့။ အစိုးရကလည်း ရှုံးနေလို့ပေါ့။ တကယ်တော့ အစိုးရက အခုထိ မရှုံးသေးဘူး။ ရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ အလားအလာဖြစ်နေတာကလည်း ဥပမာ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်။ လစာတွေ အများကြီး ယူထားတယ်။ အဖွဲ့ကြီးတဖွဲ့ဆိုပြီး သီးသန့်လုပ်ထားတယ်။ ပထမရည်ရွယ်ချက်က အစိုးရငွေတွေ မကုန်ဘဲ လုပ်မယ်ဆိုပြီး။ အခုလည်း အစိုးရကို မှီနေတာပဲ၊ ဒီစရိတ်တွေက တက်နေတာပေါ့။ ထို့နည်းတူစွာပဲ ပရောဂျက်တွေ လုပ်တယ်၊ အဲဒါတွေကို အသေအချာလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီထက်မက သက်သာနိုင်တယ်။”
“နောက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားက ထုတ်လွှတ်တဲ့ လျှပ်စစ်တွေက နယ်မြေအနှံ့ ဖြန့်ပြီး ပေးဖို့ကတော့ သူတို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လိုသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က စီမံကိန်းကျကျ၊ စီမံချက်နဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်း ဖြေရှင်းသွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
ပိုလိုနီယမ်အဆိပ်ကြောင့်အာရာဖတ်သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည် ဟု ဆွစ် သိပ္ပံ ပညာ ရှင် များ အ တည် ပြု
ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရာဆာ အာရာဖတ်၏ ရုပ်ကြွင်းအား စစ်ဆေးနေသည့် ဆွစ်ဇာလန် သိပ္ပံပညာရှင်များက ထိုရုပ်ကြွင်းတွင် သာမန်မဟုတ် သည့် ရေဒီယို သတ္တိကြွ ပိုလိုနီယံသတ္တုအားတွေရှိခဲ့ရသည်ဟု ယမန်နေ့က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အတိအကျသိရှိရန် ဆက်လက်လေ့ လာနေ သည်ဟု သိရသည်။
ထိုစုံစမ်းလေ့လာမှု၏ ရလဒ်များအား အာရာဖတ်၏ ကျန်ရှိခဲ့သည့် ဇနီး ဆူဟာ အာရာဖတ်၏ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် Lausanne-Geneva ဥပေဒနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စင်တာ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး ပါလက်စတိုင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ပက်ထရစ် မန်ဂင်တို့အား အင်္ဂါနေ့က ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့က ယမန်နေ့တွင် သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အာရာဖတ်သေဆုံးမှုမှာ ပိုလိုနီယမ် သတ္တုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ရလဒ်များထွက်ပေါ် ခဲ့သော်လည်း အာရာဖတ်အနေဖြင့် အဆိပ်ခပ် ခံခဲ့ရခြင်းရှိ/မရှိဆိုသည်ကို ကောက်ချက်ချ၍ မရသေးကြောင်း သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
အာရာဖတ် သေဆုံးသွားပြီး ကာလအတော်ကြာမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများ စတင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အကြောင်းအရင်းအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သိရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲကြောင်း မန်ဂင်က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အာရာဖတ်မှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၌ ပြင်သစ် စစ်ဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့် အကြောင်းအရင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့မှန်း မသိရှိခဲ့ရပေ။ သေဆုံးပြီးနောက် အလောင်းအား ခွဲစိတ်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ဘဲ၊ သေဆုံးရခြင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းသော ဆေးစစ်ချက်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
Posted in: သတင်း, အထူး
Written by လွန်းသစ်
ဘာလဲဟဲ့မျိုးစောင့် ဥပဒေ -ရန်ကုန်သား
မြန်မာအစ - တကောင်း ကနှင့် မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်က ၏ ဝိရောဓိ။